पूर्वसांसद रहेका बुवाले आमालाई बो’क्सी भन्दै निकालेपछि छोरीको यस्तो मार्मिक सन्देश (हेर्नुस् भिडियो) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > पूर्वसांसद रहेका बुवाले आमालाई बो’क्सी भन्दै निकालेपछि छोरीको यस्तो मार्मिक सन्देश (हेर्नुस् भिडियो)
admin March 3, 2020 भिडियो, समाज	0
काठमाडौं । पूर्व सांसद रहेका बुवाले आमालाई बो क्सीको आरोप लगाएर घरवाट निकालिदिएपछि उनका छोरीहरुले मार्मीक सन्देश दिएका छन् । बुवालाई मार्मीक शन्देस दिँदै जवान भएका छोरीहरुले आमालाई हेला गर्न नपाउने बताएका छन् । उनीहरुले बाबाको पनि माया लाग्ने बताउँदै आमाको पनि उत्तिकै माया लाग्ने भएकाले आमालाई परेको पी डा सहन नसक्ने बताएका छन् । जनताले भोट दिएर जनप्रतिनिधि बनाउने आफ्ना लागि राम्रो काम गरिदेलान् ।
छोरीहरुले आफुलाई छोरी होइन भनेर बाबाले भनेको भन्दै छोरीहरुले डिएनए जाँच गर्न बाबालाई चुनौती दिएका छन् । उनीहरुले सानो छँदा आफुहरुले बुवाले अन्याय गरेको नबुझेको भएपनि अहिले त सबै कुरा बुझेको बताए । बुवा भनेर दशैंमा टिका लगाउन जाँदा पनि बुवाले तँ बाहुन होस ? भन्दै जवाफ लगाउने गरेको बताए । अ न्या यमा परेकाहरुले न्याय पाउने कानुन बनाउलान्, न्याय देलान् भनेर नै हो । तर एउटा पूर्व सांसदको कारण उनकै श्रीमती धरधरी रो एकी छन् ।
श्रीमतीले छोरी जन्माएको भन्दै अ प हेलना गर्ने पूर्व सांसदले श्रीमतीलाई बो क्सीको आ रोप समेत लगाउने गरेको भन्दै उनी रुँ दै मिडियामा आएकी छन् । फोन गर्दा पनि श्रीमानले तेरो आवाजले मेरो भाग्य विग्रन्छ, ल क लाग्दैन फोन नगर भन्दै जवाफ लगाउने गरेका छन् । अन्तरजार्तिय विवाह गरेका पूर्वसासंसद पासागं शेर्पाले श्रीमती करिश्मा खरेल शेर्पालाई यस्तो या तना दिने गरेका हुन् ।
बुबा बेपत्ता हुनु भयो ,आमा पोइला जानू भयो ,दुई सान भाइ बहिनी छ्न ! जाडोमा लगाउने कपडा सम्म छैन!